एक दयालु मानसिकता राख्नु भनेको शरीरमा रहेको ऊर्जा संरक्षण गर्ने अर्को तरिका हो । यस्तो अभ्यासलाई विनम्र हुनु भनिन्छ । उदाहरणको लागि अपरिचितसँग आँखा जुध्यो भने पनि मिठो मुस्कान दिएर हिँड्ने । उसले सोचोस् की यसले मेरो बारेमा राम्रो सोचिरहेको छ । यस्तो सकारात्मक कार्यले मानिसहरूलाई अनावश्यक मूल्याङ्कन गर्ने बानी विकास हुन दिँदैन । अरूलाई मूल्याङ्कन गर्नुको सट्टामा आत्मालोचना गर्न सिक्यौ भने मनमा अरूको बारेमा चलेका नकारात्मक संवादलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । यी सामान्य कुरामा ध्यान दिएमा आफ्नै हेरचाहमा आफ्नै लगानी बढ्छ ।
बालबालिकाले कसरी असल साथी छनोट गर्छन् ?
‘धाःला नेवा भ्वय् छेँ’ मा रमाइरहेकी निक्की
‘पाइप लाइन’मा छन् बलिउडका खेलसम्बन्धी यी चलचित्र
को हुन् भारतीय मूलका ट्विटरका नयाँ सिइओ ? यस्तो छ करिअर प्रोफाइल
मत परिणाम घोषणा कार्यक्रममा ओली र रावलबीच खासखुस (तस्बिरहरू)